Ama-AeroLeads: Khomba amakheli we-imeyili alindelekile ngale Plugin Chrome | Martech Zone
Akunandaba ukuthi inethiwekhi yakho inkulu kangakanani, kuhlala kubonakala sengathi awusoze waba nokuxhumana okulungile. Ikakhulu lapho usebenza nezinhlangano ezinkulu kakhulu. Imininingwane yolwazi yokuxhumana ivame ukuphuma esikhathini - ikakhulukazi ngoba amabhizinisi anenzuzo enkulu yabasebenzi.
Amandla okubheka imininingwane yokuxhumana ngesikhathi sangempela kusuka kumthombo oqinile kubalulekile emizamweni yakho yokuphenya ephumayo. Ama-Aeroleads iyinsizakalo ene-Chrome Plugin ehambisana nayo eyenza iqembu lakho lokuthengisa lenze lokho kanye.
AeroLeads ivumela ochwepheshe bokuthengisa abaphumayo ukucinga oxhumana nabo yinkampani noma nge-plugin yabo ye-Chrome - bamba imininingwane yabo yokuxhumana engaphakathi kwesizinda sabo futhi ehlobene nephrofayili yomphakathi oyibhekile.
Sebenzisa i-Aeroleads Chrome Extension kulula:
Faka Isandiso se-Chrome, uyisebenzise, ​​futhi useshe ku-AeroLeads, Google, LinkedIn, Crunchbase, AngelList, njll.
Khetha Amathemba Ahambisanayo bese uwadlulisela ku-AeroLeads ohlwini lwethemba.
I-AeroLeads izolanda yonke imininingwane yebhizinisi noma yomuntu efaka i-imeyili, igama, inombolo yefoni, namaphrofayli omphakathi.
Ungathumela ngisho nohlu ku-CRM yangaphandle uma ungathanda ukwakha uhlu lwethemba lapho. Imininingwane yokuxhumana inikezwa cishe ngo- $ 0.50 ngerekhodi ngalinye. Ungahlola i-plugin ngezikweletu eziyi-10 zamahhala.
Ukuhlanganiswa kwe-Aeroleads Lead
I-Aeroleads ikhiqize ukuhlanganiswa ukucindezela imininingwane yokuxhumana ngqo kwi-akhawunti yakho noma kwamanye amathuluzi, kufaka phakathi iMailchimp, iSalesforce, i-Insightly, iPipedrive, iZapier, iZoho, I-Hubspot, neFreshSales.
Qala Isivivinyo Sakho Samahhala
Ukudalula: Sisayinwe ne AeroLeads futhi sisebenzisa isixhumanisi sethu sokuxhuma kunkinobho engenhla.
Tags: ama-aeroleadsApithenga imininingwane yokuxhumanathenga amarekhodi alindelekileisandiso se-chromei-plugin ye-chromeuhlu contactthola imininingwane yokuxhumanaAma-Freshsalesthola imininingwane yokuxhumanaindawoUkuqondisisauhlu apii-mailchimpukuphumaI-Pipedriveuhlu lwethembasalesforcezapierI-Zoho
Ukubaluleka Kwecebo Lokumaketha Ividiyo: Izibalo Namathiphu